Ayax ku dagay Deegaano ka mid ah Gobolka Togdheer | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ayax ku dagay Deegaano ka mid ah Gobolka Togdheer
Ayax ku dagay Deegaano ka mid ah Gobolka Togdheer
Degaano hoos yimada gobolka Togdheer ayaa waxa ku habsaday mudooyinkii udanbeeyay oo ay la ciirciiraysa ayax fara badan oo ku habsaday dhul daqsimeedkii gobolka Togdheer, taasi oo uu dhibaato wayn ku hayo jiritaanka iyo nolasha deegaano badan oo ku teedsan gobolka Togdheer.
Mid ka mida xoolo dhaqata ku sugan deeganada uu ku habsaday ayaxu ayaa cabasho balaaran ka muujiyay, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah wax looga qabto.
“Xanuunbaa laga qaaday,xoolihii way bukaan,way indha baleen,caano lagama liso,cagihiina way ka curyameen,oo nabaro ayaa ka soo baxay,Dhulkii wuu yacsuman yahay ,waana aradan yahay arligu”ayuu yiri mid ka mida xoolo dhaqatada gobolka Togdheer.
Wasiirka Beeraha beeraha Somaliland ayaa sheegay in ay si deg deg ah wax uga qaban doonaan dhibaatooyinka uu sababay Ayaxu, waxaana uu sheegay in Koox dhaqaatiir ah ay u direen deegaanada uu ku habsaday.
Waxaa uu sheegay in Ayaxa uu bilowday Bishii Julay ee Sanadkaan, islamarkaana Wasaarada ay waddo qorshe looga hortagaayo.